မရဏခေါ်သံနှင့် ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ သဘင်ပွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » History » မရဏခေါ်သံနှင့် ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ သဘင်ပွဲ
မရဏခေါ်သံနှင့် ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ သဘင်ပွဲ
Posted by fatty on Nov 17, 2010 in History |9comments
တခါက comment တခုမှာ တစ်စုံတယောက်က သီပေါမင်းနန်းတက်ရေး မင်းညီမင်းသားတွေ ဘယ်နှစ်ယောက်များအသတ်ခံလိုက်ရသလဲလို့ မေးဘူးကြောင်း မှတ်မိနေပါသည်။
ကြုံတုန်းမို့ …. ပြန်ပြောင်းအောင့်မေ့ဖွယ် အောက်ပါဖြစ်ရပ် အား ကိုးကားတင်ပြလိုက်ရပါသည်။
၁၈၇၉ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၅ ရက်။
မဟာသဘင်ပွဲကြီးကို ခြိမ့်ခြိမ့်သဲကျင့်ပမည့်ပထမဆုံးနေ့။ မင်းသားများအားဖယ်ရှားမည့်ပထမဆုံးနေ့လည်းဖြစ်ချေ၏။
ရုပ်ကလပ်များမြှုပ်နှံရန် ကျင်းကြီးလည်းတူးပြီးနေပြီ။ ဂီတ အက ပညာရှင်တို့ အသုံးတော်ခံမည့်စင်မြင့်ကြီးမှာတော့ေ၇ွှရောင် ငွေရောင် စက္ကူများနှင့်ခြယ်သဆင်ယင်ထားကြပေ၏။
ကတ္တီပါအိတ်အနီများချုပ်လုပ်ရသူ နန်းတွင်းသူလေးတို့ကလည်း သူတို့အလုပ်အပြီးသတ်ပြီမို့ ပွဲကြည့်ဆောင်ဘက်ေ၇ာက်နေကြပေပြီ။ ပိုးထမီ ခါးတောင်အကျီင်္ င်္များနှင့်တောက်ပြောင်နေကြသော ကချေသည်များကလည်း အမွှေးနံ့သာများလိမ်းကျံရင်း လက်ဝတ်ရတနာများဆင်ရင်ရင်း ကပြအသုံးတော်ခံရမည့်အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြကုန်၏ ။
ပွဲလမ်းသဘင်ကြီးကားစခြေပြီ။ မြန်မာဇာတ်ပွဲတို့ထုံးစံအတိုင်း ဆူဆူညံညံအသံတို့ဖြင့်လွှမ်းမိုးနေ၏ ။ သီပေါဘုရင်မှာမူ စိတ်နောက်ကျိနေဟန်ရှိသည်။ စုဖုရားလတ်မိဖရားကမူ ဆေးပေါလိပ်ကြီးကိုသာဖွာနေတော့၏ ။ ဆိုင်းဝိုင်းမှချွဲချွဲပျစ်ပျစ်မှုတ်လိုက်သောနှဲကြီး၏ အသံရှည်ကြီးနှင့်အတူ ခပ်ဝေးဝေးဆီမှ ကြောက်မက်ဖွယ်အော်သံများကြားလိုက်
သဖြင့် သီပေါဘုရင်မှာ ခေါင်းကိုငှဲ့စောင်းကြည့်လိုက်မိလေသည်။ သူ့လက်များတုန်ခါလို့နေသည်။
ဒါကိုမြင်လိုက်သောစုဖုရားလတ်က မျက်မှောင်ကြုတ်ကြည့်လိုက်သည်။ ခဏအကြာတွင် ဆိုင်းဝိုင်းတော်ကြီးမှလင်းကွင်းကြီးများကို အဆက်မပြတ်တီးခတ်လိုက်သောအသံများ
ထိုအချိန်တွင်မင်းသားများကို ကွက်မျက်ရန် စီစဉ်ထားသောနေရာရှိစင်မြင့်ပေါ်တွင် တိုင်တားမင်းကြီး ၊ လှေသင်းအတွင်းဝန်နှင့် ရနောင်မင်းသားတို့ရောက်နေကြပေပြီ။
အဆွုးစီရင်ရာတွင်ပါဝင်သည့် အာဏာပါးကွက်သားများကား အင်္ကျီမပါ ဗလာကိုယ်ထီးဖြစ်ကြသည်။ အရက်သေစာများသောက်စားထားရ်ျ ၀ါးရင်းတုတ်များကိုင်စွဲကာ ရယ်မောရွှင်ပြစွာ စကားများပြောဆိုနေကြသည်။
တိုင်တားမင်ကြီးသည် သူ့အဖေါ်များဆိသို့လှမ်းပြီးခေါင်းကိုငြိမ့်ပြလိုက်ပေသည်။ အကျဉ်းခံမင်းသားမင်းသမီးများ ကလေးများကို ခေါ်ထုတ်လာရန်အမိန့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အချိူ့မှာကြောက်ရွံ့ခြင်းအလျင်းမရှိဘဲရှေ့ဆုံးမှလျှောက်လာကြသည်။ အချို့မှာမူ အကြမ်းဖက်ရ်ျ ဆွဲခေါ်လာရသည်။ ကလေးငယ်များမှာ အံ့သြနေကြဟန်ရျိပြီးသူတို့၏မယ်တော်
မင်းသမီးများ၏ အ၀တ်အစားများးကိုကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆွဲထားကြလေသည်။
အချက်ပြလိုက်သည်နှင့် ပါးကွက်သားတို့အဆုံးစီရင်ရေးလုပ်ငန်း စကြတော့သည်။ မင်းသားများ မင်းသမီးများ မိဖုရားများ၏ လည်မျိုကို တုတ်ဖြင့်အရိုက်ခံကြရသည်။
အရိုက်ခံရသူများမှာ အော်ဟစ်ညည်းညူရင်း ငြိမ်သက်သွားသည်နှင့် ကတ္တီပါအိပ်ထထြည့်ရ်ျ မြေကျင်းကြီးထဲသို့ပစ်ချကြသည်။
မင်းညီမင်းသားအများကား ရဲဝံ့စွာရင်ဆိုင်ကြသည်။ သုံးဆယ်မင်းသားမှာမူ သီပေါဘုရင်အား ကြိမ်းမောင်းကျိန်ဆဲရင်း သွေးအလူးလူးဖြင့် ဖာတ်သိမ်းသွားရသည်။
မက္ခရာမင်းသားကမူ ” ဟေ့ .. ငါတို့လဲ သီပေါလိုဘုရင်ဖြစ်ခဲ့ရင် သူလိုဘဲလုပ်ကြမှာဘဲ ဘာဆန်းလို့လဲကွ ” ဟုလှမ်းအော်နေလေ၏။ မိုင်းတုံမင်းသားကား … သီပေါနှင့်
အာဏာသားတို့အပေါ် သံသရာတွင် အပြစ်မယူလိုကြောင်း မသေမီပြောသွားရှာသေးသည်။
အာဏာပါးကွက်သားတို့သည် လူပေါင်း ရှစ်ဆယ်သော မဟာဆီမဟာသွေးတိုကို သုံးရက်တိတိ ကွပ်မျက်သုတ်သင်ခဲ့ကြရလေတော့သည်။
( တက္ကသိုလ်စိန်တင်၏ နန်းကျဘုရင်သီပေါ .. စာအုပ်ကို ကောက်နှုတ်ရ်ျ အကျဉ်း မျှ ပြန်လည်သီကုံး ဖေါ်ပြပါသည်။ )
ဦးလေး ၀တုတ် ဟိုတလောက မင်းညီ မင်းသားတွေ သုတ်သင်တာကို ရှာဖွေ ဖြေထားတာ ဆူးပါ.. နောက်ပြီး ဆူး ရှာတွေ့တဲ့ ဦးဖိုးကျား ရေးတဲ့ စာအုပ်ကနေ ရှာပြီး ဖြေတာ အခု ဖတ်ရတာနဲ့ ကွဲလွဲနေလို့.. ထိုစာအုပ်ထဲမှာတော့..
ည ၉နာရီ ၀န်းကျင် မှာ ၄၀နီးပါး အသတ်ခံရတာ သီပေါမင်းတောင် မသိရှာဘူးလို့ ရေးထားတယ်။ ဘယ်ဟာ မှန် သလဲ မသိဘူး
အဲ့သည်တုန်းက နာရီက တော်တော်မြန်နေတာ (နာရီအမျိုးစားမမှတ်မီပေမယ့် Rolex ဖြစ်ဘို့ တော့များတယ်)
ဘုန်းကြီး ဝတ်တက်ပြီးစအချိန် ဆိုတော့ ခုနစ်နာရီကျော်ကျော်ရယ်ပါ
ဒီကိစ္စဟာ အင်္ဂလိပ်တွေ အထက်မြန်မာပြည်သိမ်းဖို့ အဓိကအကြောင်းပြချက်တခုဖြစ်တယ်လို့ ဖတ်ဖူးပါတယ်..။ သီပေါမင်းသိပါတယ်..။ သိဆို သူ့နန်းတင်တဲ့ စုဖုရားလတ်အမေက သေသေချာချာအကွက်ချစီမံပေးထားတာလို့ မှတ်မိပါတယ်..။
မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ဒါမျိုးတွေချည်းပဲ..။ အနော်ရထာလက်ထက်ကစလို့ ..နန်းတွင်းဟာ ဒီလိုလုပ်ခဲ့တာချည်းပဲလို့တောင် ပြောလို့ရတယ်.။။ အခုထိလည်း ဒီအတိုင်းပဲ..။
သမိုင်းနောင်တ ရတတ်ကြအောင် ဒါမျိုးကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြဖို့ကောင်းတယ်..။ ပြည်တွင်းကတော့ ခွင့်ပြုမှာ မဟုတ်သေးဘူး..ပြည်ပမှာ ရိုက်ဖို့ကောင်းတယ်..။
လူပေါင်း ၈၀ အတွက်ပေါ့..။
ဦးဖက်က ရုပ်မြင်သံကြား ထုတ်လုပ်သူလုပ်ခဲ့ဖူးတော့ ဒါရိုက်တာလုပ်၊ ကိုခိုင်ကပိုက်ဆံရှိတော့ ပရိုဂျူဆာပေါ့၊ ကျနော်ကတော့ ပါးကွက်အာဏာသားလုပ်မယ်၊ မှူးကြီးမတ်ရာကို တခြားသင့်တော်ရာမှာရှာ။ မင်းညီမင်းသား၊မင်းသမီးတွေအတွက်တော့ အခုတောင်ကွန်မန့်ဝင် ရေးသလိုလိုနဲ့ ဒီသတင်းအနံ့ရလို့ ကြိုပြီးမျက်နှာပြနေသူတွေ ကျနော်တို့ရှေ့မှာရှိနေပါပြီ။
ဦးလေး ကြောင်ကြီးက အာဏာ ပါးကွက်သား လုပ်မှာ မိုလို့… ပြီပြင်အောင် Human Big Cat ပိုစ်ထဲက လိုဖြစ်နေပြီပေါ့.. ဟုတ်လား. ရုပ်ရှင် အခွေထွက်ရင်တော့ ကြည့်ပေးမယ်
ဒါတွေဟာအရိုင်းအစိုင်းရုံ့ရင်းကြမ်းတမ်းတဲ့လူ၊ လူမျိုးတစုတို့ရဲ့အဲဒီခေါတ်က အမင်ဂလာဝိသေသပြယုဂ်တွေဘဲ။
အဓိကအချက်က မတရားလုပ်ထားတာရှိရင် ချက်ချင်းဖြေရှင်းရမယ်။စနစ်ကမှားလား၊လူကဘဲမှားလား၊ဘက်သူ့ကိုမှအပြစ်တင်လိုစိတ်မထားဘဲ၊အမှားကနေသင်ခန်းစာယူနိုင်ရမယ်။ အပြစ်ရှိကြောင်းပေါ်လွင်ခဲ့ရင်လဲနားလည်ပြီးနောက်ကိုဒီလိုမျိုးမကျူးလွန်အောင်ထိုက်သင့်တဲ့အပြစ်မျိုးပေးတန်ပေးပေါ့။အားလုံးအတွက်သင်ခန်းစာအဖြစ်အရှုံးထဲကအမြတ်ထုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်အားလုံးအတွက်အောင်ပွဲ win-win situation ဘဲပေါ့။ဒီလိုဘဝသင်ခန်းစာကိုယူနိုင်စွမ်းရှိမှလဲလူ့လောကကြီးဟာယဉ်ကျေးသော၊သာယာဝပြောသောစနစ်ကြီးဖြစ်တော့မှာပေါ့။
မင်းအ၇ိုက်အ၇ာဆက်မဲ့နန်းသွေး၇ှိသူတွေကိုစုဖု၇ားလတ်၇ဲ့အမိန့်နဲ့သတ်ဖြတ်တဲ့”၀ါး၇င်းတုတ်”၇ာဇ၀င်ဟာမြန်မာ့သမိုင်းကိုညစ်နွမ်းစေတာအမှန်ပါ။ ပုဂံဆက်မှာလဲအလားတူကိစ္စတွေ၇ှိခဲ့ပါတယ်။ ယိုးဒယား၇ာဇ၀င်နဲ့၇ု၇ှားဇာလု၇င်လက်ထက်တွေမှာလဲထိုနည်း၎င်းတွေတွေ့၇တာဝမ်းနဲစ၇ာအလွန်ကောင်းပါတယ်..။
အချိ်န်အခါကအဓိကမဟုတ်ပေမဲ့နန်းတွင်းအယူ၇ှိခဲ့တာက…ဇာတာကိန်းခန်းအားနဲချိန်တွေဟာအကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်နေ၀င်/စောင်းတဲ့အချိန်မို့၊ မင်းညီမင်းသားတွေကိုသုတ်သင်တာ မနက်ပိုင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့…ကြိုတင်၇ိပ်မိတဲ့နန်းတွင်းအဆက်အချို့ (မင်းညီမင်းသားတွေပါလောက်ပါတယ်။) ကအောက်အကျေ(အောက်မြန်မာနိုင်ငံ)ကိုထွက်ပြေးကြကြောင်း၊ ဇာတ်မြှုပ်ပြီးတံငါယောင်၊ ဖိုထိုးသမားယောင်နဲ့အစဉ်အဆက်တွေပေါက်ဖွားလာကြောင်းပါခင်ဗျား…။ တခို့ကလဲ၇ှမ်းပြည်ဘက်ကိုပြေးကြတာဘဲ…။
ဦးဖက်ဆီးကိုကျေးဇူးတင်တယ် ဖတ်ရတာတော်တော် တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသွားတယ် စက်တင်ဘာအရေးအခင်းတုန်းက တာမွေကျောင်းရှေ့ မြေကြီးပေါ်မှာမှောက်နေရတုန်းကခံစားချက်မျိုး ပြန်ပီးခံစားရတယ်
အရင်ခေတ်ကတော့ ဘုရင်တွေ ခတ်ဆိုတော့.. စာရေးတတ် ဖတ်တတ်.. စာအုပ်စာပေ သိမ်းဆည်းမှု ခက်ခဲတာတွေ ရှိခဲ့လို့ ထင်ပါရဲ့.. မှတ်တမ်းက ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနဲ့ မသဲမကွဲ ဖြစ်တာမျိုးတွေ ရောချ လုံးချ ဖြစ်သွားတာတွေ ဖြစ်နေတာ.. အခုခေတ်ကြီးထဲမှာတော့.. မှတ်တမ်း မှတ်ရာ မှတ်သားလွယ်တဲ့ အတွက်.. မသဲမကွဲ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ လယ်ပြင်မှာ ဆင်သွားသလို အထင်သား မြင်နိုင်ပေမဲ့.. ဆင်ဖြတ်သွားပြီး ရေတက်သွားတော့ ဆင်ခြေရာ ပျောက်သွားတာမျိုးတွေ ဖြစ်ရင်တော့ ပြောတတ်ဘူးနော်…ယခု လက်ရှိကတော့ သမိုင်းဆရာတွေ လက်ထဲမှာ ဖြစ်ချင်တိုင်း မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။